အသက်ဆက်ရန်မောင်းနှင်ရန်: ဖော်မြူလာ ၁ ယာဉ်မောင်းများသည်အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။ - သတင်း
အသက်ဆက်ရန်မောင်းနှင်ရန်: ဖော်မြူလာ ၁ ယာဉ်မောင်းများသည်အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။
Netflix ၏ဖော်မြူလာ ၁ ကိုကြည့်ရှုခြင်းမှရှင်သန်ရန်မောင်းနှင်ခြင်းသည်ယာဉ်မောင်းသူအချို့မည်မျှငယ်သည်ကိုသတိမပြုမိရန်ခက်ခဲသည်။ Lando Norris နှင့် George Russell တို့သည်ခြောက်ဆပုံစံဖြင့်လတ်ဆတ်နေပုံရသည်၊ Alex Albon နှင့် Leclerc တို့မှာအသက်မကြီးကြပါ။ ထို့ကြောင့်မောင်းနှင်မှု၏ Drive to Survive Formula 1 ၏အသက်အရွယ်နှင့်တရားဝင်လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်အငယ်ဆုံးဖြစ်သည် ?
ဤရွေ့ကား Drive ကိုမှ Survive ဖော်မြူလာ 1 ယာဉ်မောင်းများ၏အသက်အရွယ်:
Lewis က Hamilton က
အသက် - ၃၆
202o တွင်သူ၏သတ္တမမြောက် F1 ကမ္ဘာ့ဖလားခေါင်းစဉ်ကိုအနိုင်ရခဲ့ပြီးမိုက်ကယ် Schumacher ၏ 91 အနိုင်ရခဲ့သည့်ယခင်စံချိန်ကိုကျော်လွှားနိုင်သူ Absolute Champ Lewis Hamilton သည်အသက် ၃၆ နှစ်ရှိပြီးသူ့ကိုလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ဒုတိယအသက်အရှည်ဆုံးမောင်းနှင်သူဖြစ်စေသည်။
အသက် - ၃၁
ဘယ်သူ့ကိုမှစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ရမယ်၊ Valtteri Bottas ဟာအသက် ၃၁ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးသူကသူ့ Mercedes အသင်းအိမ်ထောင်ဖက် Lewis Hamilton ထက်ငါးနှစ်ငယ်တယ်။
အသက် - ၂
Verstappen သည် ၂၃ နှစ်သာရှိသေးသည်၊ သူသည်ဇယားကွက်ပေါ်အငယ်ဆုံးယာဉ်မောင်းတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ မက်စ်သည်အသက်အငယ်ဆုံးကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဖြစ်ရန် Sebastian Vettel မှစံချိန်တင်ထားရန် Red Bull နှင့် Christian Horner တို့၏ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အသက် - ၂၅
အဲလက်စ်အယ်ဘွန်သည် Red Bull အသင်းဖော် Max Verstappen ထက် ၂ နှစ်သာလွန်သည်။ တုန်လှုပ်နေသော 2020 စီးရီးပြီးနောက်, Albon ရဲ့ထိုင်ခုံ Racing Point ရဲ့ Sergio Perez ၏အစားထိုးအတွက် Red Bull အားဖြင့်ကျဆင်းသွားသည်။ သူသည်အသင်းအတွက်အရံယာဉ်မောင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Kardashian နှင့် Jenner ၏အားလုံးအသက်ဘယ်လောက်လဲ?
Racing Point အတွက် 2020 ယာဉ်မောင်းရပ်တည်မှုတွင်စတုတ္ထနေရာ၌ရပ်နေသောဖာရက်သည်ယခု Red Bull အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ သူက 31 နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။
အသက် - ၂၂
Lance Stroll သည် (၂၂) နှစ်သာရှိသေးသည်။ သူ့ကိုလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ဒုတိယအငယ်ဆုံးမောင်းသူဖြစ်စေခဲ့သည်။ Racing Point ပြိုင်ပွဲအတွက် Stroll Drive များ၊ သူ့ဖခင် Lawrence Stroll ကို ၂၀၁၈ တွင် Force India အဖြစ်ဝယ်ယူခဲ့သည့်အဖွဲ့သည် Racing Point သည်ယခု Aston Martin ဖြစ်လာသည်။
Red Bull ပြိုင်ဘက် Max Verstappen ကဲ့သို့ပင် Charles Leclerc သည် ၂၃ နှစ်ဖြစ်သည်။ Ferrari အတွက် Leclerc သည် ၂၀၂၁ ရာသီတွင်အနီရောင်ကား၌တတိယနှစ်ဖြစ်သည်။
အသက် - ၃၃
Ferrari မှာနှစ်တစ်နှစ်အကြာမှာ Vettel ဟာအသင်းကိုစွန့်ခွာခဲ့ပြီး Lance Stroll နဲ့အတူအရင်က Racing Point Aston Martin အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၃၃ နှစ်အရွယ် F1 သည်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဖြစ်သည်။
အသက် - ၂၆
ကားလို့စ် Sainz 2019 နှင့် 2020 Formula 1 စီးရီးအတွက် McLaren များအတွက်ကားမောင်းပေမယ့်ယခုအသင်း၏ဒုတိယမောင်းသူအဖြစ် Sebastian Vettel အစားထိုး Ferrari ကသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ အသက် ၂၆ နှစ်ရှိပြီ။
အသက် - နှစ်ဆယ့်တစ်
ဖော်မြူလာ ၁ မှအသက်ဆက်နိုင်သည့်မောင်းနှင်မှုအားလုံးတွင် Lando Norris သည်အသက် ၂၁ နှစ်သာရှိသေးသည့်အသက်အငယ်ဆုံးယာဉ်မောင်းဖြစ်သည်။ Bristol မှမွေးဖွားသောပြိုင်ကားသမားသည်ယခုရာသီတွင် McLaren ကိုနောက်တဖန်မောင်းနှင်လိမ့်မည်။
ဝေးလံခေါင်ဖျားသောလမ်းကြောင်းတွင်အပျော်ရွှင်ဆုံးလူသားဒန်နီယယ်ရီကာဒိုသည် ၃၁ နှစ်ဖြစ်သည်။ ရီစီဒိုသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် Red Bull မှထွက်ခွာသွားပြီးနောက် ၂၀၁၁-၂၀၁၀ ရာသီများအတွက် Renault ကိုပြေးပြိုင်ခဲ့သော်လည်းရလဒ်ကောင်းသည့်နှစ် ၂၀၂၁ တွင် McLaren သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ယခု Alpine မှတံဆိပ်ကပ်ထားသည့် Renault ။
အသက် - ၂၄
Esteban Ocon သည်ယခု Alpine ဟုလူသိများသော Renault ကိုအပြေးပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့သည်။ သူက ၂၄ နှစ်။
ဂျော့ခ်ျရပ်စယ်လ်သည် ၂၀၂၀ ရာသီတွင်ဝီလျံအတွက်များစွာဆွဲဆောင်ရန်ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်၊ သို့သော်သူသည် Sakhir Grand Prix တွင် Mercedes ကိုကားမောင်းသည့်အခါအပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုတွင်နောက်ကျကျန်ခဲ့သည်။ သူသည်အနိုင်ရလိုဟန်တူသည်၊ မတော်တဆတာယာပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်းကသူ၏အခွင့်အလမ်းများကိုပျက်စီးစေသည်အထိဖြစ်သည်။ သို့သော်ဂျော့ခ်ျမှာ ၂၃ နှစ်သာရှိသေးသည်။
အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် Latifi သည် ၂၀၂၁ ရာသီအတွက် Williams တွင်ရှိနေသည်။ သူ၏ဒုတိယနှစ်မှာ George Russell နှင့်အတူတူဖြစ်သည်။
ကြောင် meme မှာအော်ဟစ်မိန်းကလေးနှစ်ယောက်
Pierre ၏ Gasly
အဲရစ်အယ်လ်ဘွန်သည်သူ၏ RB ထိုင်ခုံသို့ခုန်ချစဉ် Red Bull အဖွဲ့မှနုတ်ထွက်ပြီး AlphaTauri သို့ပြောင်းရွှေ့ပြီးနောက်ပီတာဂက်စ်လီသည် 2019 ရာသီဆိုးရွားသည်။ အဆိုပါပြောင်းရွှေ့မှုသည်ယာဉ်မောင်းနှစ် ဦး အကြားလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်အချို့သောလျောက်ပတ်သောတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားစေခဲ့ပြီး ၂၅ နှစ်အရွယ် Gasly သည်ယခုနှစ် AlphaTauri တွင်ဆက်လက်တည်ရှိသည်။
Kyvat အား ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် AlphaTauri မှဖြန့်ချိခဲ့ပြီး၊ လူသစ် Yuki Tsunoda အတွက်နေရာရခဲ့သည်။ ယခုသူသည် Ocon နှင့် Alonso တို့နှင့်အတူ Alpine အသင်းအတွက်အရံယာဉ်မောင်းဖြစ်သည်။
အသက် - ၃။
Romain Grosjean သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် Bahrain Grand Prix တွင်ဆိုးဝါးသောလေယာဉ်ပျက်ကျမှုမှလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးသူ့ကားသည်မီးတောက်လောင်ခဲ့သည်။ မီးဘောလုံးထဲတွင်စက္ကန့် ၃၀ နီးပါးပိတ်မိနေသော်လည်း Grosjean သည်မီးလောင်နေသောကားမှတစ်နည်းနည်းဖြင့်လမ်းလျှောက်နိုင်ခဲ့သည်။ အသက် (၃၄) နှစ်အရွယ်ဟာ့စ် (Haas) မှ ၂၀၂၁ ရာသီအတွက်ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရသည်။
အသက် - ၂၈
စိတ်ပျက်စရာ ၂၀၂၀ ရာသီပြီးနောက် Haas ယာဉ်မောင်း Kevin Magnussen နှင့်သူ၏အသင်းဖော် Romain Grosjean ကို Nikita Mazepin နှင့် Mick Schumacher တို့ဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။
အသက် - 41
Kimi Räikkönenသည် (၄၁) နှစ်ဖြစ်ပြီးသူ့ကိုလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်အသက်အကြီးဆုံးပြိုင်ကားသမားဖြစ်စေခဲ့သည်။ Alfa Romeo အသင်းသည်Räikkönen၏တတိယမြောက်ရာသီကို ၂၀၂၁ ရာသီအတွက်အတူတူမောင်းနှင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အသက် - ၂၇
Alfa Romeo ကားမောင်းသူသည်အသက် ၂၇ နှစ်ရှိသူ၏အသင်းဖော်ထက် ၁၄ နှစ်ငယ်သည်။
အထူးပုံရိပ်အကြွေး: @charles_leclerc , @danielricciardo , georgerussell63 @
ဖော်မြူလာ ၁: ရှင်သန်ရန်မောင်းနှင်မှုကိုယခု Netflix တွင်ရနိုင်သည် ။ နောက်ဆုံးပေါ် Netflix သတင်းများ၊ ဉာဏ်စမ်းပဟေ,ိများ၊ အစက်အပြောက်များနှင့်မှတ်စုများအားလုံးအတွက် Facebook ပေါ်မှာ Netflix ၏သန့်ရှင်းသောဘုရားကျောင်းလိုပဲ။
Survive ပုံပြင်များမှအခြား Drive:
• ဤတွင် Netflix ရဲ့ Drive မှ Survive မှယာဉ်မောင်းများအတွက်အားလုံး Instagram ကိုဖြစ်ကြသည်